Global Voices teny Malagasy » Miatrika Volavolan-dalàna Momba Ny Fanarahamaso, Tafalatsaka Antenantenan’ny Fahatairana Sy Ny Tsy Firaharahiana Ny Vahoaka Frantsay · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Oktobra 2015 5:19 GMT 1	 · Mpanoratra Suzanne Nandika Tantely
Sokajy: Frantsa, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Zon'olombelona
Tao anatin'ilay fanafihana Charlie Hebdo, ary na teo aza ny fanoherana mafy nataon'ny vondrona miaro ny fahalalahan'ny olon-tsotra, nandany  ny volavolan-dalàna fanomezana alalana ny governemanta hanara-maso ireo antso an-telefona sy mailaka an'ireo ahiahiana ho mpampihorohoro, tsy mila fahazoan-dàlana mialoha avy any amin'ny mpitsara, ny parlemantan'i Frantsa. Mitaky ireo mpanome tolotra Aterineto ihany koa ilay lalàna mba hametraka ny antsoina hoe “boaty mainty” izay mitety sy mamakafaka ny angon-drakitr'ireo mpampiasa vohikala an-tapitrisany, ary manery azy ireo hamela malalaka io angon-drakitra io ho afaka azon'ireo fikambanana fitsikilovana. Manome alàlana ireo mpiasan'ny fikambanana fitsikilovana mba hametraka fandraisampeo kely, fakàna sary, ary fanangonana izay fitendrin'ireo ahiahiana ho mpampihorohoro any an-tranony ihany koa ilay volavolan-dalàna. Araka ilay lalàna , afaka mamela ny fanaovana fanarahamaso amin'ny antony tsy voafaritra mazava tsara aza ny governemanta, sahala amin'ny hoe “tombontsoa lehibe ho an'ny poltika ivelany” sy fisorohana “ny asan-jiolahy voarindra.”
Ireo vondrona mpiaro ny fahalalahan'ny olon-tsotra, ao anatin'izany ny Amnesty International, Article 19, ny Kaomity Mpiaro ny Mpanao Gazety ary ny Global Voices Advox, samy nanjohy ilay taratasy  nosoratan'ilay vondrona Frantsay voalohany mpiaro ny zo niomerika La Quadrature du Net, navoaka ny 30 Septambra, natao ho an'ireo solombavambahoaka Frantsay sy nanome andianà sosokevitra maro hanitsiana  ilay volavolan-dalàna. Manoratra izao izy ireo:
Na teo aza ny tsikera mafy nataon'ireo vondrona miaro ny fahalalahan'ny olon-tsotra, fanoherana zara raha nisy avy tamin'ireo vahoaka sy ireo kilasy politika no mba nantrehan'ilay volavolan-dalàna. Avy eo, nangataka ny Filankevitry ny Lalampanorenana  ny Filoha Frantsay François Hollande, mba hamerina hijery ilay volavolan-dalàna, taorian'ny nanekena azy tanteraka ny volana jona, manamarika fa voalohany izao  no nisy hoe filoha namerina ny raharaha tany amin'ny fitsaràna nialoha ny famelàna ny lalàna iray ho ampiharina. Nanazava  ny fizotr'ilay izy ny vohikala Frantsay Les Moutons enragés, namintina ilay tatitra amin'ny antsipirihany nataon'ny Nextimpact  :
Raha hijery ny andinindininy an'izay voalazan'io volovolan-dalàna fanampiny momba ny fitsikilovana iraisam-pirenena io, vakio ny tatitra mora takarina  nalefan'ny gazetiboky Frantsay l'Obs ny 9 Septambra.
Tonga masiaka haingana ireo vondrona mpiaro ny fahalalahan'ny olon-tsotra, taorian'ny faneken'ny maro ilay lalàna. Ny Amnesty International France niampanga  ilay lalàna ho “fikapohana mafy ny zon'olombelona.”
Ny 15 Septambra, nilaza  izao tao amin'ny vohikalany ny La Quadrature du Net :
Amin'ny lafiny lalàna, efa nisy hetsika natao manoloana ireo fitsaràna Frantsay , teo ambany ezaka niarahan'ny European Digital Rights  (Zo Niomerika Eorôpeana) (EDRI, vondrona mitoetra any Bruxelles).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/10/09/75172/
 Araka ilay lalàna: http://www.theverge.com/2015/7/24/9030851/france-surveillance-law-charlie-hebdo-constitutional-court
 nanjohy ilay taratasy: http://www.laquadrature.net/en/Civil-rights-groups-condemn-draft-mass-surveillance-bill-to-be-adopted-in-France
 voalohany izao: http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/07/23/le-conseil-constitutionnel-censure-trois-articles-de-la-loi-sur-le-renseignement_4696112_4408996.html
 tatitra amin'ny antsipirihany nataon'ny Nextimpact: http://www.nextinpact.com/news/96458-loi-renseignement-texte-sur-surveillance-internationale-explique-ligne-par-ligne.htm
 ny tatitra mora takarina: http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150909.OBS5547/exclusif-la-nouvelle-loi-sur-les-ecoutes-de-la-dgse.html
 fitsaràna Frantsay: https://edri.org/three-french-ngos-challenge-french-international-surveillance/